Fanamarihana an-tserasera - pejy 3 14 - Ny Diabe Eran-tany
Oniversite any Balearic Islands miaraka amin'ny volana martsa
05 / 11 / 2019 ny Jessica Orrala Slim
Vantany vao nitsidika an'i Maroc ny Base Team dia nifindra tany amin'ny Nosy Canary ary nandeha lalana hafa. Mbola nitohy tany Maoritania i Martina Sicard avy any Frantsa izay voatery nandrindra ny hetsika tamin'ny fahatongavan'ny mpanorina izao tontolo izao tsy misy ady, Rafael de la Rubia. Charo Lominchar dia nijanona tao Las Palmas de Gran Canaria
Mankalaza ny volana martsa ny mponin'i Senegal
05 / 11 / 2019 05 / 11 / 2019 ny Antonio Gancedo
Tanàna roa any Senegaly no nankalaza ny volana martsa 2. Amin'ireo tranga roa ireo dia isaorana ihany koa ny hetsika notanterahin'ny fikambanana Energy for Human Rights nandritra ny taona maro, izay nampiorina sekoly sy ivon'ny kolontsaina ao amin'ireo tanàna roa ireo, izay azo nalamina ireo hetsika ireo. Amin'ny andro 30, tao N'diadane, ampahany amin'ny
Thies miaraka amin'ny World March
04 / 11 / 2019 02 / 11 / 2019 ny Antonio Gancedo
Tamin'ny Andro 27, ny Team Team dia nankany Thiès, tanàn-dehibe iray izay misy ny 70 km miala an'i Dakar, dingana Senegaly faharoa izay nanombohan'ny fandaharana tamin'ny tolakandro tao amin'ny Plaza de Francia, tamin'ny alàlan'ny federasiona momba ny harena voajanahary sy Mitoetra ho toy ny vector fandriampahalemana. izany no
Saint Louis, fidirana any Senegaly
02 / 11 / 2019 02 / 11 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ny ekipa mpanentana eo an-toerana izay tarihan'i Omar Diallo dia nitarika ny ekipa Base hihaona amin'ny manam-pahefana ara-pivavahana sasany: ny fitsidihan'i Abbot Barnabas, curator an'ny seminera; avy eo tamin'ny imam Baye Dame Wade, zafikelin'i Abbas Sall, manam-pahaizana lehibe amin'ny firahalahiana Tidiane, izay avy eo niarahaba ny ekipa noho izany
Dingana an-dàlam-pandehan-dàlana, mankany an-dàlana mankany Maraoka
31 / 10 / 2019 31 / 10 / 2019 ny Jessica Orrala Slim
Tao anatin'ny tontolo iainana mahasalama camaraderie ary miaraka amin'ny fanentanana ho an'ny tanora, mpaka sary efatra sy mpaka sary iray no nanao ny fandrakofana ny 2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana amin'ny lalana mankany Maraoka. Ny hetsika nanomboka tamin'ny Madrid tamin'ny Oktobra 2 avy ao amin'ny 2019, dia nanasongadina ny
08 / 11 / 2019 31 / 10 / 2019 ny Antonio Gancedo
Oktobra 28 - Nanapa-kevitra izahay fa hanomboka ny dian'ny Ranomasina Mediterane ho an'ny fandriam-pahalemana avy any Genoa hampahatsiahivana ny olona fa misokatra foana ny seranan-tsambo izay te-hifanakaiky amin'ireo mpitsoa-ponenana sy mpifindra monina, ary misokatra foana, amin'ny vesatry ny fitaovam-piadiana. Ofisialy sy tsy ara-dalàna. Ao an-tanànan'i Liguria, ny volana Mey lasa teo, dockers of
Ny volana 27 - Amin'ny ora 18.00, ny Bamboo, ny sambo Éxodo Foundation izay mandray ireo mpiasan'ny Fandrindrana Ranomasimbe Mediterane, dia manafaka ny fihodinana ary miala ao Genoa. Toerana: Marseille. Mijanòna aloha amin'ny làlan-dranomasin'ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Toerana iray
Nouakchott, 23 ary 24 ny volana Oktobra
13 / 11 / 2019 29 / 10 / 2019 ny Antonio Gancedo
Tamin'ny Oktobra 23, nisy fivoriana natao manodidina ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatsiarovana ao amin'ny Sehatra ara-kolotsaina Diade Camara, teboka fanamarihana ao Nouakchott ho toerana fivoriana ho an'ny fikatrohana ara-tsosialy sy ara-kolotsaina. Misokatra ho an'ireo vondrona manodidina ary koa ireo fikambanana nasionaly
28 / 10 / 2019 28 / 10 / 2019 ny Jessica Orrala Slim
Amin'ny an'izao tontolo izao tsy misy ady ary herisetra-Ecuador Association, Sonia Venegas Paz, filoham-pirenena ary Gina Venegas Guillén, mpikamban'ny fikambanana sy mpaka sary, tsy nandany ezaka ary tamin'ny hevitra tokana hiaro ny idealy azy, dia nankany Espaina tanteraho ny nofinofinao ary manorata pejy vaovao amin'ny tantaranao.
25 / 10 / 2019 25 / 10 / 2019 ny Antonio Gancedo
Miaraka amin'ny zavakanto sy ny kolontsaina amin'ny ankapobeny ary hanohy hiaraka amin'ilay 2ª Macha Mundial. Ny zavakanto sy ny kolontsaina amin'ny fanehoany rehetra dia azo jerena manokana amin'ny fanehoana ny fahatsapan'ny olombelona sy ny fahasamihafana. Ny faniriana sy faniriana tsara indrindra dia mihazakazaka amin'izany, mampiseho ao amin'ny fahatsapan-tena, ny
Ny Nosy Gorea sy Pikine (Dakar)